Fandraisana | MRU MEDIA
Fampandrenesana fampiasana ara-drariny
Fitaovana izay nialoha ny olombelona voalohany - zava-miafina arkeolojika hita
Ny fahitana ny 'tanànan'ny goavambe' fahiny tany Etiopia dia afaka namerina nanoratra ny tantaran'ny olombelona
Ireo zanaky ny Anunnaki very: ny ADN foko Melanesiana karazana karazana tsy fantatra
Andrew Crosse sy ilay bibikely tonga lafatra: Ilay lehilahy namorona tsy nahy ny fiainana!
Portalita hyperdimensional: Mety ho eo ambany fitaoman'i Saturne i Stonehenge?
Dropa Stone: piozila ivelan'ny tany 12,000 taona avy any Tibet!
The Ebers Papyrus: lahatsoratra ara-pitsaboana ejipsianina taloha dia manambara ny finoana majika-majika sy ny fitsaboana mahasoa
Moa ve io fasan'ny mpanjakavavy egyptiana 4,600 XNUMX taona io ho porofo fa ny fiovan'ny toetr'andro dia namarana ny fanjakan'ny farao?
Tanàna sy tanàna 16 taloha izay nilaozana tamin'ny fomba tsy fantatra
Fehin-tànana 40,000 XNUMX taona hita tany Siberia dia mety noforonin'ny karazana olombelona lany tamingana!
Tranobe Anunnaki talohan'ny tondra-drano: Ilay tanàna fahiny 200,000 XNUMX taona any Afrika
Ny bateria Baghdad: artifact ivelan'ny toerana toerana 2,200 taona
Famoronana taloha 12 mialoha ny androny
Ireo asa-tanana tranainy hita tany Mexico dia nanaporofo ny fifandraisan'ny Maya tamin'ny vahiny
10 ny zava-baovao tsy fantatra miafina indrindra hita tao amin'ny ranomandry mandrakizay an'ny Arktika sy ny Antarctic
Neny miendrika volamena hita any Egypt
Ireo mpahay siansa mitady vahiny dia mahita famantarana ET miafina avy amin'ny Proxima Centauri
Tsy hita ny lavaka mainty 10 miliara avo heny mihoatra ny Masoandro
Ny mistery an'i Tunguska, ilay meteorite namely an'i Siberia tamin'ny herin'ny baomba atomika 300 tsy misy soritra!
Ny dwarf mena dia mety hanana planeta mampiantrano fiainana vahiny, hoy ny soso-kevitr'ireo mpahay siansa
Raha nonina indray mandeha i Mars dia inona no nitranga?
Ny horohoro tamin'ny 'andrana fatoriana Rosiana'
Sarintany kintana 40,000 taona misy fahalalana be pitsiny momba ny astronomia maoderina
10 amin'ireo aretina tsy fahita hafahafa izay tsy hinoanao fa tena izy
The Blimp L-8: Inona no nanjo ny mpiasa ao aminy?
The Roswell Rock: sari-tany vahiny very?
Inona no nanjo ilay American Airlines Boeing 727 nangalatra ??
Tsutomu Yamaguchi: Ilay lehilahy tafavoaka tamin'ny baomba ataoma roa
The Granny Ripper: Tamara Samsonova, mpamono olona serial Rosiana izay namono olona 14 taona!
Juliane Koepcke, nianjera 10,000 metatra ary tafavoaka tamin'ny fianjerana fiaramanidina nahafaty olona iray
Piramida milentika ao amin'ny Farihy Rock any Wisconsin
Karandoha goavam-be tranainy misy 'tandroka' hita nandritra ny fikarohana arkeolojika tany Sayre tamin'ny taona 1880
Midira ho an'ireo taratasinay
Makà fampandrenesana momba ireo lahatsoratra fisondrotana tsara indrindra isan-kerinandro.
Amin'ny alàlan'ity fanamarinana ity boaty ity dia manamafy ianao fa efa namaky ary manaiky ny fepetra fampiasainay momba ny fitehirizana ny angona natolotra tamin'ny alalan'ity taratasy ity.
© ZONY MRU MEDIA | 2017-2021
Mampiasa cookies amin'ny tranokalanay izahay hanomezana anao traikefa tena ilaina indrindra amin'ny fahatsiarovana ireo safidinao sy famerenana mitsidika. Rehefa manohy mizaha ny tranokalanay ianao dia manaiky ny fampiasana ny cookies rehetra.
Hamaky bebe kokoaAkaiky ary ekeo ⟶
Tsy afaka manonta atiny amin'ity tranonkala ity ianao.